Wallapop inogadziridza uye inovandudza chat zvinoonekwa | IPhone nhau
Wallapop inogadziridza uye inovandudza chat zvinoonekwa
Wallapop ndeimwe yemafashoni maficha muSpain, uye kuwedzera kwayo kwepasirese kuri kuitika nezvakanakisa manhamba. IWallapop phenomenon yatosvika paterevhizheni, chokwadi ndechekuti nguva dzese chishandiso chichivandudzwa pamwe nekumwe kugadzirisa. Iyo Wallapop chat ndeimwe yeakakosha zvidimbu uye panguva imwechete yakaipisisa yakagadziriswa, zvisinei, mune ino yazvino yekuvandudza zvinoita sekunge vaisa chaiyo mhinduro kukurukura matambudziko. Isu tinokuudza izvo zvitsva mune ino yazvino Wallapop yekuvandudza yeIOS.
Kwete chete kuti takawana kuvandudzwa padanho rekuvandudza, izvo zvinoita kuti chishandiso chifambe nekukurumidza uye zvakanyanyisa, asi ivo zvakare vakaita tweak shoma kune mazhinji emifananidzo yatakawana kutenderedza kunyorera, urwu runyorwa rwezvinhu zvitsva zve kunyorera, chaizvo Wallapop maitiro:
Isu taida kuisa muparadzi weMutambo weZigaro, asi Hodor anga ari pamberi pedu. Saka ngatitangei kubhizinesi.
Iwe unoziva here izvo zvinogadziridzwa zvinoita kunge zvisina basa uye hapana chitsva? Zvakanaka, ichi hachisi chimwe chazvo. Vagadziri vedu vari pakakwirira uye vakavandudza iwo maapponi eapp uye vagadzira yavo font. Ndapota gamuchirai Wallie! Iye zvino iyo app ichataridzika yakachena uye ichave kutanga kweimwe shoma shanduko. Ramba wakasvinura meso 😉
Isu tinoramba tichiita kuvandudza muchikamu chedu chevashandi cheapp. Sonia ainetsekana uye akabvunza mahunyanzvi edu kuti avandudze zvisingaite kuti zvive nyore kupindura mibvunzo yako. Uye mune izvo zvatiri, iwe uchazviona.
Kana iri yekutaurirana, kurodha pasi kwekutaurirana nenzira yepainiki kwaitwa. Izvo zvekuti munhu wese anzwisise zvinoreva kuti wekutanga mutoro wekutaurirana kwako uchaitwa nekukurumidza.
Isu takagadzirisa zvemukati zvinhu, takaisa shanduko, takagadzirisa zviputi uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvisingaonekwe, asi izvo zvinopengesa matekinoroji. Vakatomisa hofisi yakatsaukana kuti vadzikame.
Idzi gadziridzo dzichauya nekumwe kunetseka, isu tamira kutsigira iOS7 kuvandudza kugadzikana mune dzichangoburwa shanduro dzeOS uye takasiya iyo app chete muchiSpanish neChirungu kwechinguvana, kuwedzera mimwe mitauro munguva pfupi. Isu tinoshuvira kuti hachisi chinhu chakakura kwazvo uye kuti vanoshanda kuitira kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Y Totenda kunaka kwavo havana kutisiira chero Game of Thrones vapambi, vakazvibata zvakanaka. Vamwe vachachemera kudenga nekuti varega kutsigira iOS 7, asi chokwadi ndechekuti inzira yekuvandudza mashandisiro uye nekuita kuti areruke, pasina kukweva shanduro dzekare. Chokwadi ndechekuti ini ndinogara ndiri mushandisi weWallapop, kunyangwe zvichinetsa kuwana chimwe chinhu chakanyatso kukosha, nekuda kwenhamba hombe yevashandisi varipo uye vasingazive musika wechipiri-ruoko, kana havana kufarira kutengesa (kana zvakanyanya, ivo vanongoda kutenga pamutengo wekutenga), zvisinei, nguva nenguva ndawana chimwe chinhu chinonakidza, kana zvinotonyanya kukosha, ndatengesa zvigadzirwa zvemagetsi zvakawanda kuburikidza nazvo, anenge gumi nemaviri anenge .
Iko kunyorera kunotora 40,8 MB chete uye rimwe rematambudziko aro kushandiswa kwedata. Zvirinani, izvozvi vakavandudza nhaurwa, vachitibvumidza kutumira zvinongedzo, zvaimbove zvaisagona, pamusoro pekuti meseji dzinoita senge dzinoyerera kekutanga nguva pakarepo, izvo zvinozopedzisira zvatidzivirira isu kuti tigovane nhamba yedu yefoni yekushandisa mamwe masevhisi eCoriri. Nekudaro, isu hatichakwanise kutumira mapikicha kuburikidza neiyo chat, poindi isina kunaka, nekuti mazhinji ehurukuro dzinovhurwa ndedzechokwadi kukumbira mamwe mafoto echinyorwa, nekuti mazhinji anowanzoisa mashoma kwazvo, kana mapikicha akashata. Saka kana usati wabatana neWallpop phenomenon parizvino, inguva yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Wallapop inogadziridza uye inovandudza chat zvinoonekwa
Edu prats akadaro
Chat yaWallapop, saAugust 2020, ichiri kusuwa.
Kushanda kwayo ndiko kwakaipisisa pasirese!
Pindura Edu Prats